Bhuka Dzimba dzeKugara-pa-Kumba Nguva | Zvazvino Zvinyorwa
Nguva kuva pamba yebasa uye hutano. Vamwe vanozovatora zvakanyanya uye vamwe zvirinani, uye panogona kugara paine bhuku mavari kutiperekedza. Inokosha muhupenyu chaihwo, isu tave kufunga dzimba dzedu, sezvatisingazombofungidzira, kukosha kwekuva kana kugara madziri. Uye mumabhuku ivowo danho uye hunhu hwenyaya dzakawanda dzakanaka Pamhando dzese. Izvi ndizvo 6 mazita kusarudzwa kupi dzimba, mansions uye dzimba dzakakura zvakare protagonists.
1 Imba Dema - Stephen King naPeter Straub
2 Bleak Imba - Charles Dickens
3 Imba Yemweya - Isabel Allende
4 Chakavanzika cheCasa Aranda - Jerónimo Tristante
5 Imba Yakakombama - Agatha Christie
6 Kuwa kweImba yaUsher - Edgar Allan Poe
Imba nhema - Stephen King naPeter Straub
Maviri anotyisa ma greats saMambo naStraub vakaburitsa ino novel mushure Zango, vekutanga vakanyora pamwe chete. Ndakaita nyeredzi mukati Jack sawyer, uye apa anozviita zvakare mune imwe nyaya inomutora kuburikidza nenyika mbiri dzinoenderana, iyo ye Matunhu, kwaaifanira kununura amai vake, uye chaiye chaiye. Zvino, uye kuve aimbove mutikitivha wekuuraya, Jack anoziva tenga imba mutaundi reWisconsin. Haana chaanorangarira nezverwendo rwake rwekuMatunhu, asi aifanira kusiya mapurisa eLos Angeles apo chiitiko chakamuratidzira nenzira isingatsanangurike.
Zvino, nekuda kwevamwe umhondi mutaundi iro uye kana mukuru wemapurisa womunzvimbo iyi akamukumbira rubatsiro, Jack anotya kuti iyo zvinoshamisa zviratidzo izvo zvakamukwevera iye kune iyo yakapfuura yeTerritories. Y kutarisana nezvakaipa zvinomukomberedza zvichafanirwa kupinda muBlack House.
Imba yakaparadzwa - Charles Dickens
Iyi Bleak Imba ndiyo pekugara kunogara protagonist, Esther summerson, yakasiiwa nevabereki vake. Kudzivirirwa kubva John jarndyce, murume ane moyo wakanaka, anga achirwa kwenguva refu nekuda kwe herencia. Esther anogara pamwechete na Ada naRichard, hama dzaJohn, nherera nevarombo nekuda kwenhaka, vaanoedza kubatsira zvakare. Esther, mumunhu wekutanga, uye iyo munyori wenyaya vari kuverenga nyaya yake yekurwa yekutsvaga kwavo kuzivikanwa uye kubudirira munharaunda.
Imba Yemweya - Isabel Allende
Ndiyo yekutanga novel yeAllende. Inotitaurira iyo nyaya ye a mhuri ine simba yevaridzi veLatin America inotungamirwa natateguru Stephen Trueba. Humambo hwake hwakavakwa nesimbi chibhakera chinotanga kupunzika nekuda kwekufamba kwenguva uye neshanduko shanduko yakamukomberedza. Asi mhuri yake yakaputsikawo. Iyo firimu vhezheni yemakumi mapfumbamwe yakabudirira zvikuru.
Chakavanzika cheCasa Aranda - Jerónimo Tristante
El zita rekutanga kwakaziviswa naJerónimo Tristante Victor Ros, muongorori wake weMadrid wezana XIX century. Ros mupurisa wechidiki anovanza a rima rapfuura sembavha uye mumiririri wekuhwanda. Iye zvino ave kuraira a new brigade kurwisa mhosva uye yayo nyaya yekutanga anomutora kuenda kuimba yeAranda. Ikoko, vakadzi vatatu, nekufamba kwenguva, vakaedza kuuraya murume wake mushure mekuverenga ndima kubva kuDante's Divine Comedy. Asi zvakare iyo kuuraya pfambi dzinoverengeka kubva pasi pevhu reguta.
Imba yakakombama - Christie Agatha
Agatha Christie aive nyanzvi pakuimisikidza zvakavanzika nemhosva mudzimba kana mudzimba. Mune ino nyaya iyo mansion ine yekuda kuziva kusendamira chivakwa. Iyo imba inogara zvizvarwa zvitatu zvemhuri yemabhirionea wechiGreek Aristide leonides. Saka kuburikidza nemukoridho yaro nemakamuri vanhu vese vanoyambuka, kubva kune vadiki uye akanaka Brenda, mukadzi wechipiri watateguru iye zvino akura kwazvo, uye Sophia, muzukuru wake, uyo tezvara vatezvara vake ndiye Commissioner wemapurisa. Asi ipapo Aristide akaiswa chepfu uye nhengo dzese dzemhuri yake ndidzo fungidziro.
Pane a yazvino firimu vhezheni yezita iri rakaburitsa nyeredzi Glenn Close, Terence Stamp kana Gillian Anderson.
Kuwa kweImba yaUsher - Edgar Allan Poe
Imwe yenyaya dzinotyisa kwazvo ine imba seye protagonist. Imba yehama dzeUsher inoguma ne Roderick naMadeline kunyura navo pamberi pekushamisika uye kutya kunotarisa kweshamwari yake nemutauri yenyaya iyi izvo zvinogara zvakakodzera kuti uzive kana kuverenga zvekare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Bhuka dzimba dzekugara-pamba-nguva
Inoda kuziva uye inonakidza yekupinda kune vateveri veiyo genre.
Semupiro, 'Imba yemashizha' naDanielewski zvakandishamisawo.
Stephen King angadai akataura kutukwa kweHill House, Shirley Jackson ... 😉
Pindura kune chump